Memories of the Sword ( 2015 ) - Myanmar Asian TV
အခု တခေါက်တင်ဆက်ပေးမဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ rating အနေနဲ့ IMDb မှာ 6.3/10 နဲ့ Rotten Tomatoes မှာ 73% အသီးသီးရရှိထားတဲ့ korea Drama , Action & Historical ဇာတ်လမ်းလေးပါ …
အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ Hollywood အထိတောင် ထိုးဖောက်ထားနိုင်တဲ့ Korea နာမည်ကျော် မင်းသား Lee-Byung Hun နဲ့ K-Drama series ထဲမှာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ” Goblin ” ထဲက မင်းသမီး Kim-Go Eun နှင့် Jeon-Do Yeon တို့ကပါဝင်ထားပါတယ် …
ဇာတ်လမ်းကို ပြောရရင် ဂိုလျောခေတ် နန်းတွင်းကို အခြေပြု ရိုက်ထားပါတယ် … ပြည်သူတွေဘက်က ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဓား သုံးလက်အဖွဲရဲ့ ကိုယ်စီ ခံစားချက်တွေ … Korea Movie ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လက်စားချေမှုတွေ … မိဘမေတ္တာတွေ အစုံစုံပါဝင်ပါတယ် …
တကယ်ကိုကြည့်ရှုသင့်ပြီး လက်မလွတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားပါ … ဇာတ်လမ်းကို ပြောပြချင်ပေမဲ့ အရသာ ပေါ့သွားမှာ စိုးတဲ့ အတွက် မပြောပြတော့ပါဘူး … Translator ကိုယ်တိုင် သဘောကျတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်လို့ ….
Translator : PDoubleST
Actors: Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Kim Soo-an, Kim Tae-woo, Lee Byung-hun, Lee Jun-ho, Lee Kyung-young
Openload.co Myanmar950 MB Download Soliddrive.co Myanmar950 MB Download
High And Low The Movie ( 2016 )
Big Bang အဖွဲ့ဝင် Seungri ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေနော် … ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့ Seungri ကကိုရီးယားဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ရဲ့သား လူဆိုးနေရာကနေ ပါဝင်ပေးထားပါတယ် … High & Low : The Movie လို့အမည်ရတဲ့ဒီကားလေးကတော့ ဂျပန်လူငယ်ဖိုက်တာလေးတွေ အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် … ဖိုက်တာလို့ဆိုပေမယ့် သက်သက်မဲ့ရန်ဖြစ်ပြဿနာရှာနေတတ်တဲ့သူများ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ဒေသကို ကာကွယ်ချင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်မယ်…
The Advocate: A Missing Body ( 2015 )
MMATV ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ပိတ်ရက်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်အောင် စုံထောက်ကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ …. 2015မှာထွက်ရှိထားပြီး နာမည်ကြီးမင်းသား Lee Sun-kyun နဲ့ Goblin ကားထဲကမင်းသမီး Kim Go-eun တို့ပါဝင်ထားတဲ့The Advocate ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ရင်ဖိုစရာကောင်းတဲ့ စုံထောက်ကားလေးပါ … ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ – အမှုလိုက်ရာမှာ တစ်ခါမှအရှုံးမရှိဘူးတဲ့ ရှေ့နေ Byeon Ho-Sung (Lee Sun-Kyun)…
2018 August လက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Action ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ…. လူတိုင်း သိကြတဲ့ IP Man ဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက ဇာတ်လိုက်မင်းသားကြီး Donnie Yen ကနေပြီးတော့ Big Brother မှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Action ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ Donnie Yen က ငယ်ငယ် သူကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့…
သိပ်မကြာသေးခင်ကမှ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – လန်ဒန် LA မှာ လူသားတွေ Orc တွေ Elf တွေ Gang တွေနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန် … Elf ရဲ့ မှော်ကြိမ်လုံးကိုရဖို့ အပြန်အလှန် သတ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန် … Ward ဆိုတဲ့လူသားနဲ့ Nick ဆိုတဲ့ Orc ကြားက…
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ဂျိုဆွန်းခေတ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကပ်ဘေးဆိုက်တဲ့ အကြောင်း ရိုက်ထားကဲ့ ကားပါ အညွှန်းကတော့ ဂျိုဆွန်းခေတ် ဘုရင် ဂျွန်းဂျုံး နန်းတက်ခါစမှာ ကူးစက်ရောဂါဆိုတဲ့ ကပ်ဘေးဆိုးကြီး တစ်ခု ကျရောက်လာခဲ့တယ် အဲ့တာနဲ့ ရောဂါကူးခံရတဲ့သူ တွေကို သတ်ပစ်ကြတယ် အဲ့ထဲမှာမှ ကလေးတစ်ယောက်ကို စစ်သူကြီးက ကယ်ထားခဲ့တယ် ကလေးကို ဆက်ထားရင် ကပ်ရောဂါတွေ ပျံ့လာနိုင်တယ်ဆိုပြီး ဝန်ကြီးရဲ့ အပုတ်ခတ်မှုကြောင့်…
A Better Tomorrow ဆိုတဲ့အတိုင်း 1986 က စလို့ Chow Yan-Fat အဓိကသရုပ်ဆောင်​ပြီး ရိုက်​ကူးခဲ့တဲ့ ရဲစုံထောက်​ကား​လေးဘဲဖြစ်ပါတယ် …. နာမည်​ကြီး အက်​ရှင်​ ဇာတ်ကားတွေ အရိုက်​များတဲ့ ​ဟောင်​​ကောင်​ရဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး ဂျွန်​ဝူ က​နေ ရိုက်​ကူးထားတာဖြစ်​လို့ အက်​ရှင်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါဘူး … အခုထွက်တဲ့ A Better…
Lifeline ( 1997 )
1997 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Lifeline ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…. ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဟောင်ကောင်ရဲ့ နာမည်ကြီး မင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sean Lau က မီးသတ်သမား ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ထားပါတယ်…. သူက မီးသတ်သမား ဘ၀နဲ့ စွန့်စားရတာကို သဘောကြတဲ့သူ တစ်ယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆရာဝန်မလေး Carman Lee နဲ့…
Genre: Action, Comedy, Medical
Trailer: Memories of the Sword ( 2015 )